Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] व्यवसाय प्रकार:Manufacturer मुख्य बजार: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide निर्यातक:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report, BSCI विवरण:गिलास अरोमा विसारक,गिलास तेल विसारक,गिलास आवश्यक तेल विसारक
Home > उत्पादनहरू > गिलास विसारक > उच्च गुणवत्ता रंगीन ग्लास आवश्यक तेल सुगन्ध विसारक
मोडेल संख्या: DT-1822B
रंगीन ग्लास कभर: हामीले ध्यानपूर्वक हाम्रो अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजरलाई स्टाइलिश रंगीन ग्लास कभरको साथ डिजाईन गर्यौं जुन प्रकाश, एलईडी लाइट शो रोशन गर्दछ!
C रंग मोड र स्वचालित टिमर: प्रीमियम आवश्यक तेल गिलास विसारक different विभिन्न रंगहरु प्रकाश दिन्छ जुन स्वचालित रूपमा परिवर्तन हुँदैछ, जबसम्म तपाइँ आफ्नो मनपर्ने रंगमा मोड सेट गर्नुहुन्न! तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुन्छ: रातो, पहेंलो, गाढा निलो, हरियो, निलो, बैजनी र चमकको सेता। हामीले स्वत: पानीहीन बन्द बन्द मोड पनि डिजाइन गरेका छौं।
अरोमा थेरपीका लाभहरू: यसले पीडा, निद्रा, तनाव, चिन्ता, र अधिकमा मद्दत गर्दछ! सबै भन्दा लोकप्रिय सुगन्धहरू हुन्: लेमनग्रास, दालचीनी, सिट्रस, लभेंडर, चिया रूख, स्पीर्मिन्ट, मसलाको रूसी, र पेपरमिन्ट OIL।
सुरक्षित र सबै प्राकृतिक: हामी हाम्रो पीपी सामग्री घर विसारक NO तातो संग डिजाइन र सुविधा को लागी एक स्वत: शट अफ टाइमर जोडे। केवल तपाईंको मनपर्ने सुगन्धहरू भिन्न गर्न सुरु गर्न केहि तेलका केही ड्रप थप गर्नुहोस्!
बृद्धि र सुगन्धित सुधार: आराम गर्नुहोस् र स्वास्थ्य लाभहरूको आनन्द लिनुहोस्, हाम्रो शान्त धुंध र शान्त प्रकाश प्रदर्शनको साथ। विलासी स्पाको फाइदाहरू काट्नुहोस्, जबकि तपाईंको आफ्नै घरको आराममा!
ग्यारेन्टी: हामी केवल सुगन्ध फैलाउने उपकरण बनाउनका लागि उत्कृष्ट सामग्रीहरू प्रयोग गर्छौं, त्यसैले हामी आफ्नो प्रदर्शनमा यति विश्वस्त छौं कि हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौं।
गिलास सुगन्ध विसारक चित्रहरु:
गिलास आवश्यक तेल विसारक अपरेशन:
गिलास अरोमा विसारक
गिलास तेल विसारक